မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၃၃၂) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ Face Book ကနေ ထွက်ရတော့မည်လော (၁) ၂၀၁၈ ခု၊ ဧပြီလ(၁၀)ရက်နေ့ Face Book CEO Mark Zuckerberg သည် Senate Hearing ခေါ် အမေရိကန် အထက် လွှတ်တော်ကော်မတီရှေ့မှောက် လာရောက်အစစ်ခံရ၏။ TVက တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပုံကို Recording လုပ်ထားပြီး ကျွန် တော်သည် ဘောလုံးပွဲဆက်ကြည့်နေလိုက်သည်။ (ပုံ – ၁) VOA တွင် (၁၅) နှစ်လုပ်ခဲ့စဉ် ထိုသို့သော Senate Hearing ၌ မကြာခဏ သတင်းသွားယူရ၏။ ထို့ပြင် ကျွန်တော်နေထိုင်ရာ Washington DC SW...
မိုက်ခဲစိန် – ဖေ့စ်ဘွတ်က ပြည်တွင်းရေးတွေ ၀င်စွက်နေပြီလား၊ ဇူကာဘတ်ဖြေပါ
မိုက်ခဲစိန် – ဖေ့စ်ဘွတ်က ပြည်တွင်းရေးတွေ ၀င်စွက်နေပြီလား၊ ဇူကာဘတ်ဖြေပါ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ အခုခေတ်အစားဆုံးက facebook နဲ့ fakenews တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေမပြောခင် လက်ရှိ အမေရိကားအခြေအနေကို တင်ပြရသည်ရှိသော် fakenews ကောင်းမှုနဲ့ သမတဖြစ်လာတယ်လို့ အစွပ်စွဲခံရတဲ့သမ္မတကြီး ထရန့်ကို သူတို့ FBI က အကြီးအကျယ် အမှုရှာနေပါတယ်။ သူ့တရားရေးဌာနက ၀ရမ်းထုတ်ပြီး သူ့ရှေ့နေကို ၀င်ရှာလို့ သူ ဒေါသူပုန်ထနေတယ်။ သူက တရားမ၀င်တွေ အကြမ်းဖက်တွေကို မုန်းတယ်ဆိုပြီးတော့ မက္ကစီကိုနယ်စပ်ကို တပ်မတော်လွှတ်ပြီး ကာကွယ်ရေးလုပ်ခိုင်းပါတယ်။ ပြည်ပမှာ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲခင်းပြီး သွင်းကုန်တွေ အခွန်ကောက်နှုန်း တိုးလို့ ရန်ဖက်တွေ တိုးနေပါတယ်။ ဆီးရီးယားက သူ့ပြည်သူတွေကို ဓာတုလက်နက်သုံးတိုက်တာ ထရန့်က...
ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – ဇူကာဘတ်အပြစ်
ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – ဇူကာဘတ်အပြစ် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း သာလှ
ဇင်လင်း ● အာဏာရှင်စနစ်ကချန်ထားရစ်သည့် ဗျူရိုကရေစီကြိုးနီ စနစ်ကို ဖယ်ရှားကြဖို့ လိုပြီ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂ဝ၁၈ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရပ်ရပ်သည် အတိတ်မှအရိပ်မည်းများ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှ လုံးဝလွတ်မြောက်ပြီဟု မဆို နိုင်သေးပေ။ အာဏာရှင်စနစ်ကချန်ထားရစ်သည့် ဗျူရိုကရေစီ ကြိုးနီအထပ်ထပ်ကို ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှင်းရသော အလုပ်မှာ အခက်ခဲဆုံးဟု ဆိုရမည်။ ပြည်သူလူထုမှာ ယနေ့အထိ စိတ်အေးချမ်းသာဖြင့် လုပ်ကိုင်နေထိုင်စားသောက်နိုင် ခွင့်မရရှိသေး ပေ။ အာဏာရှင်ကြိုးနီစနစ်အောက်တွင်ရရှိခဲ့သော အလေ့အကျင့်များကို အစိုးရဝန်ထမ်းများ ဆက်လက်ကျင့်သုံးလျှက် ရှိ နေသေး၍ ပြည်သူအတော်များများက အစိုးရရုံးများကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်နေကြဆဲ ရှိသည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတို့သည် ပြည်သူ့ဆန်စားနေကြသူများဖြစ်သဖြင့်၊ ပြည်သူကို လေးစားကြဖို့လိုသည်။ ပြည်သူတို့အား အမြဲကူညီရန် အဆင်သင့်ဖြစ် နေဖို့လည်း လိုသည်။ ရာထူးတာဝန်ကြီးလေ၊ ပြည်သူအတွက် တာဝန်ပို၍ကျေပွန်လေ ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရမည်။...
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ ကြိုပြင်ထားကြပါ … (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်
ရိုးခက် ● စစ်မိုးကရေစီ နိုင်ငံတော် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၈ ဘယ်တရား ဘယ်ဓားနဲ့ဆုံးဖြတ်တာလဲ လူညီညီ မညီညီ အခွင့်အရေးတန်းတူက ဘာလဲ စကားလုံးတွေ စာသားတွေ စာရွက်ပေါ်မှာ ပုံအော ဈေးပေါပေါနဲ့ လျှာပေါ်မြက်ပေါက်တွေ အလှမွေးငါးတစ်ကောင်လို ကျင်လည်ရာဝန်းကျင် နုံအအ ညနေခင်းများ ဖော်ဖော်ရွေရွေ အပြုံးတုများ ဒီဇာတ်ရှိန် ဘယ်လောက်အထိ မြင့်တက်နေဦးမှာလဲ ကနဦးထွက်ခဲ့တဲ့အပျိုတော်အခန်းရှေ့ထွက်က ခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူး မိုးထားတဲ့ဓားက ထက်နေတာလား ဆွဲထားတဲ့ပန်းချီက လှနေတာလား မနက်ဖြန်ဟာ မှောင်မိုက်လို့ ရေများများ မီးမနိုင်ခဲ့ရင် ငါတို့အားလုံး သင်းသပ်ခံနေရတဲ့နေ့ နောက်ကျောမှာထိုးတဲ့ဓားနဲ့ ဟောဒီနိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်နေတယ် ။ ။ ရိုးခက် ၃၊ ၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ရိုးခက်
ဌေးဝင်း (ဂျာမဏီ) ● ထိုနေ့ သုံးနေ့ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၈ “ရှင်လိင် ပြန်တဲ့နေ့၊ ထောင်ကထွက်တဲ့နေ့၊ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့” အစရှိတဲ့ နေ့သုံးနေ့ဟာ ဝမ်းအသာရဆုံးနေ့တွေလို့ ဆိုရိုး စကားရှိတယ်။ ဒီဝမ်းအသာရဆုံးလို့ဆိုတဲ့ နေ့သုံးနေ့လုံးမှာ ကျနော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံ လေးတွေကို စာဖတ်သူများကို မျှဝေပါရစေ။ ကျနော့်ရဲ့ ရှင်လိင် ပြန်တဲ့နေ့ကတော့ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ကျနော် ၉ တန်းနှစ် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့များ ကျနော် ကောင်းကောင်း မှတ်မိနေတာလဲ။ မှတ်မိစရာအကြောင်းလေး ရှိလို့ပါ။ ကျနော့် အသက် ၁၆ နှစ် ကျနော် ၉ တန်း ရောက်သည်အထိ မိဘတွေက ကျနော့်ကို ရှင်ပြုမပေးရသေးဘူး။ ဒါကြောင့်မို့...
လင်းငယ် ● ယိုင်ကျေးမှု သင်္ကြန် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၈ ကျနော်က ကွန်ပြူတာကိုသုံးပြီး စာရေးနေတယ်။ စာရေးဖို့ကြိုးစားနေတာက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အကြောင်း။ အခုခေတ် လူတွေအကြား အပြောများနေတာကို ရပ်ကွက်ထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သွားနားထောင်မယ့်အစား ဖွဘုတ်ဆိုတဲ့ လူမှု ကွန်ယက်ပေါ်မှာ စနည်းနာတယ်။ ပြီးရင် ကျနော်ရေးထားပြီးတဲ့ စာမူကို အင်တာနက်သုံးပြီး အီးမေးကတဆင့် အယ်ဒီတာ စားပွဲပေါ်က ကွန်ပြူတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အယ်ဒီတာ အိပ်ကပ်ထဲက မိုဘိုင်းဖုန်းဆီက အီးမေးထဲကို လှမ်းပို့လိုက်မယ်။ ထိုင်ရာက မထဘဲ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း စာတစ်ပုဒ်ကို ထုတ်လုပ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒါကိုက မြန်မာမဆန်တာများ ဖြစ်နေမလား နော်။ ယိုင်နဲ့လာနေပြီလို့ လူတွေအပြောများနေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းဆိုတော့ ယိ်ုင်ကျေးမှုလို့ပဲ လွယ်လွယ်ခေါင်းစဉ် တပ်လိုက်မိတယ်။ ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ ဖွဘုတ်ပေါ်မှာ...
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ …
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ … (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း မင်းထက်လူ
အေးငြိမ်း – မြန်မာအိမ်အကူလုပ်သားများအတွက် သင်တန်း – ၃ အခန်း (၃) – အိမ်၌ အန္တရာယ်ကင်းစွာ အလုပ်လုပ်ခြင်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၈ အလုပ်သမားတိုင်းသည် မိမိ၏အန္တရာယ်ကင်းရေးအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်တွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ အလုပ်ရှင်သည်လည်း အန္တရာယ်များသည့်အလုပ်များကို အလုပ်သမားအား မခိုင်းရဟု ဥပဒေရှိ၏။ သင်သည် အိမ်အကူလုပ်သားအနေနှင့် အထပ်မြင့်အဆောက်အဦများ၌ ပြတင်းပေါက် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရမည်။ အဝတ်လှမ်းရမည်။အထပ်မြင့်အဆောက်အဦများတွင် ပြတင်းပေါက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနှင့် အဝတ်လှမ်းခြင်းတို့သည် အန္တရာယ်များ၏။ အကယ်၍ သင် သည် ပြတင်းပေါက် အပြင်ဘက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါက အသက်ကြီးသူတစ်ဦးဦး၏ အနီးကပ် ကြီးကြပ်မှုဖြင့်သာ လုပ်ရမည်။ အေးဂျင့်သည် MOM မှ ချမှတ်ထားသော အန္တရာယ်ကင်းရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အလုပ်စတင်...
လှကျော်ဇော ● သမိုင်းသင်ခန်းစာတရပ် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၈ ကျွန်မ အခုတလောဖတ်ရတဲ့စာအုပ်တအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတရပ်ကို သမိုင်းသင်ခန်းစာတရပ်အဖြစ် တင်ပြချင်ပါ တယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ၈ လေးလုံးကာလအတွင်းက ပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးရဲ့ အိတ်ဖွင့် ပေးစာများအကြောင်းပါ။ အထူးသဖြင့် ၄၁ မျက်နှာပါ စာတန်းထဲကအဖြစ်အပျက်အချို့ကို ထုတ်နုတ်ပြောပြချင်တာပါ။ သမိုင်းမှာမြှုပ်နေတဲ့အချက်တွေပေါ်လာပြီး ဆက်စပ်တွေးတော ဆင်ခြင်ကြည့်ရင် တချို့နိုင်ငံရေးသမားများရဲ့ မရိုးသားတဲ့ လုပ်ဟန်တွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက် လျှာတွေ့အာတွေ့သုံးတတ်လေ့ရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ဖြတ်လမ်းကရရှိအောင်လုပ်သူများရဲ့လုပ်ဟန်တွေပေါ့။ သူတို့တတွေ ဘာကြောင့် ဒီစကားကြိုက်ရသလဲဆိုတာလည်း နားလည်လိုက်မိပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်း မရိုင်း ဆိုမဟုတ်လား။ ဒါ့အပြင် ဗမာပြည်ကြီးဘယ်သူတွေကြောင့် ဒီလောက်ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့သလဲဆိုတာလည်း ပေါ်လွင်လာပါတယ်။ သူတို့တ တွေ ဗိုလ်နေဝင်းကိုဗမာပြည်နိုင်ငံရေးရှေ့မျက်နှာစာရောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒီနေရာမှာ...
ဒေါက်တာတင်အောင် ● ဟောကင်း ဖြာထွက်မှု (Hawking Radiation)
ဒေါက်တာတင်အောင် ● ဟောကင်း ဖြာထွက်မှု (Hawking Radiation) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၈ ဒေါက်တာတင်အောင်၏ ဆောင်းပါးအား Jupiter Education Myanmar – JEM မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူ့နာရေးဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ခေါင်းကြီးသတင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ သူဟာနှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကျော် တွန်းလှည်းထဲမှာ မစွမ်းမသန် ဘဝနဲ့နေခဲ့ရတာတစ်ကြောင်း၊ ၂ နှစ်သာနေရမယ်လို့ ဆရာဝန်ကပြောထားငြား နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ထပ်နေသွားရတာတစ်ကြောင်း ၊ သူရဲ့ စကြဝဠာဗေဒဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ ထိုထိုသောအကြောင်းတွေကြောင့် အ ထူးပင်ကျော်ကြားသော သိပံ္ဗပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာရပါတယ်။ ဟောကင်းပြုစတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဟာ အတော်လေးပေါက်သွားတယ်။ အုပ်ပေါင်း တစ်သန်းခန့် ရောင်းရပါတယ်။ စာအုပ်အ မည်မှာ “အချိန်၏ သမိုင်းအကျဉ်း” ပါတဲ့။ အင်္ဂလိပ်ခေါင်းစဉ်က...
ကိုသန်းလွင် ● ရုရှားပြည်ပြေးတို့၏ဘဝ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၈ (၁) ရုရှားအတိုက်အခံအုပ်စုမှ အာရှာကော့ (Vlademir L. Ashurkon) မှာ ၂ဝ၁၄ ခု မော်စကိုမှထွက်ပြေးခဲ့ရာ လန်ဒန်ရောက်မှ သက်ပြင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ကရန်မလင်၏ အေးဂျင့်များက သူ့နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်နေသည်။ နောက်ဆုံးရုရှားမှ သူ့အိမ်ကိုပုလိပ်က ဝင်စီးနေပုံကို တီဗွီတွင်တွေ့လိုက်ရသည်။ သူသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ မြို့ငယ်ကလေးတွင် ဇာတ်မြှုပ်နေ ထိုင်ဖို့ ကြိုးစားသည်။ သူထွက်ပြေးနေခဲ့သည်မှာ ၆ လကျော်ကြာသည့်တိုင် သူ့နောက်ကလိုက်နေတုံးဘဲရှိသေးသည်။ သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက် မကြာမီက ရုရှားနိုင်ငံက ပြန်ရောက်သည့်သူကို သူနှင့်တွေ့စဉ် လန်ဒန်ကစားသောက် ဆိုင်တစ်ဆိုင် မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပုံအကြောင်းများကို ရုရှားထောက်လှန်းရေးအရာရှိများက အသေးစိတ်မေးမြန်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သူသည် ရုရှားအေးဂျင့်တွေကို လူအုပ်ကြားမှာ ခွဲတက်နေပြီ။ အင်္ကျီအမဲနှင့်...
ကာတွန်းဆွေသားရဲ့ မထားခဲ့ပါဘူးဆို …
ကာတွန်းဆွေသားရဲ့ မထားခဲ့ပါဘူးဆို … (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းဆွေသား
ဆောင်းယွန်းလ ● အေးရာ အေးကြောင်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၈ အလုပ်က ကိုယ့်ကိုမသတ်ခင် ကိုယ်က အလုပ်ကိုသတ်လိုက်တယ် ပွဲပြီးပေမယ့် မီးကမသေခဲ့ဘူး မီးခိုးကြွက်လျှောက် တကောက်ကောက်လိုက်လာတယ် အချိန်ကိုက်ပေးထားရတဲ့ နာရီနှိုးစက်သံဟာ ချိန်ကိုက်ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲထွက်တဲ့ အသံပဲ ရာသီအပြောင်းမှာ နှင်းကကျလို့ကောင်းတုန်း ကိုယ်လက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေက အေးပြီး ခေါင်းထဲက ပူနေတယ် လူအပြောင်း မူအပြောင်းမှာ ကောင်းစားသူဟာ တင်မြှောက်ခံအစိုးရပဲ ကိုယ်တိုင်ကတော့ အစိုးမရနိုင်တဲ့ ဘဝထဲမှာ နှစ်ပဲတစ်ပြားတိုးမြှင့်ခံရတဲ့ လစာဝဲကတော့ထဲမှာ နှစ်ပြားတစ်ပဲစာလောက်လည်း မပျော်ခဲ့ပါဘူး ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေရင် လူကောင်းထင်မှတ်တဲ့ လောကထဲမှာ ရူးတယ်လို့ထင်ရအောင် ကောင်းချင်ယောင်ဆောင်နေခဲ့ရပေါ့ အေးရာအေးကြောင်းဖြစ်ဖို့အတွက် တစုံတယောက်နဲ့ ထွေရာလေးပါးပြောကြည့်မိပေမယ့် အပေါက်အလမ်းမတည့်ခဲ့ဘူး ရပ်တည်ချက်အကြောင်း ဆွေးနွေးတော့ ဖိနပ်နံပါတ်ဘယ်လောက်စီးသလဲလို့ မေးတယ် မောသွားတာပဲ ရေသောက်လို့လည်း အမောမပြေတော့ဘူး...
ဒေါက်တာစိန်ဝင်း – “မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်၊ နိုင်ငံသားဟောင်းလဲ မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံသားအသစ်လဲ မဟုတ်ဘူး”
ဒေါက်တာစိန်ဝင်း – “မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်၊ နိုင်ငံသားဟောင်းလဲ မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံသားအသစ်လဲ မဟုတ်ဘူး” (မိုးမခ အင်တာဗျူး) ဧပြီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈ ကျနော်တို့က ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တိုင်းပြည်က ထွက်သွားတဲ့လူတွေဗျ။ ဒီပြင်တိုင်းပြည်တွေမှာလည်း သည်လိုလူမျိုးတွေ မျိူးဆက်တွေ ရှိခဲ့တာပါ။ ဒီပြင်တိုင်းပြည်တွေမှာ သည်လိုအရေးကိစ္စတွေကို အလေးအနက်ထား စဉ်းစားပြီး ရှင်းလင်းထားတာတွေ စီစဉ်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ သို့သော်လည်းပဲ တဖက်သတ်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ကို နိုင်ငံသားဟောင်းဆိုပြီး လုပ်တာကျတော့ …. ကျနော်တို့က နိုင်ငံသားအဟောင်းလဲ မဟုတ်ဘူးဗျ။ နိုင်ငံသားအသစ်လည်း မဟုတ်ဘူးဗျ။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံသားပဲ။ အဲဒါကိုတော့ ကျနော်တို့ မလျော့ဘူး။ မိုးမခ – ဆရာ နေကောင်းပါလားခင်ဗျ။ ကျန်းမာရေးကော ကောင်းရဲ့လား။ ဒေါက်တာစိန်ဝင်း – ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ ကောင်းတယ်ဆိုသော်လည်း ဆေးတွေတော့ စားနေရတာပေါ့။ ကျနော်က နှလုံးရောဂါတော့...
Photo – DMG News Online မောင်ခိုင်အောင် (စစ်တွေ) – ကျွန်တော်နှင့်လွှတ်တော် (၁) (Development Media Group Online Journal မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၈ နေပြည်တော်မှာ လွှတ်တော်များ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့ပြီ။ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးများကို အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်နေ့ စတင်ခဲ့ သည်။ ဆောင်းဦးရောက်ခဲ့သော်လည်း ဆောင်းရိပ်ဆောင်းငွေ့များ ပီပီပြင်ပြင် မတွေ့ရသေး။ မိုးရိပ်လေရိပ်သန်းသော နေ့ရက်များပင် ရှိခဲ့သေးသည်။ နေပြည်တော်မှ မိုင်ထောင်ချီဝေးသော အရပ်များတွင်ကား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဦးတည်သော မုန်တိုင်းများ အစပျိုးနေသည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် အခွင့်အရေးကို မြတ်နိုးသူများကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားသော လူလုပ်မုန်တိုင်းအတုများ ဖြစ်နေသည်။ စစ်အာဏာစနစ်၏ အ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – DKBA ဘိုးတော်နဲ့ အမှတ်မထင် တိုက်ပွဲကြုံတွေ့ခဲ့စဉ်က – ၂ (နိဂုံး) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၈ Commander ဘ၀ ပထမဦးဆုံး စစ်မြေပြင် အမှတ်မထင် တိုက်ပွဲကြုံတွေ့ခဲ့စဉ်ပစ်ခါနီးနောက်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးရ ၅၀။ ရန်သူ့အသံတွေလည်း စတင် ကြားနေရပြီး သူတို့နားသိပ်ကပ်သွားပါက ရိပ်မိသွားနိုင်လို့ တောင်ထိပ်ဆုံးအပေါ်က ဆင်းဆင်းခြင်း တပ်စိတ်၂စိတ် ရင်ဘောင်တန်း သိပ်မဖြန့်နိုင်ဘဲ မြားဦး v ပုံစံ ကျည်လမ်းကြောင်း မထပ်ဖို့နဲ့ တပ်စိတ်၂စိတ် အလယ် မြားဦးခေါင်းထိပ်မှာ စက်လတ်ကို လျာထားပြီး ရှေ့ကိုက် ၂၅ အထိသာ ပိုတိုးလို့ မရကြောင်း တွက်ချက်ရပါတယ်။ ရန်သူက မိမိပစ်အား ရိပ်မိပြီး နည်းတယ်ထင်မှာစိုးလို့ မိမိဆီက ပစ်သံကြားတာနဲ့ လမ်းကြောင်းထိမ်းထားတဲ့ အကိုကြီးတပ်စုဆီကလည်း...
Jasmine ● မှန်ဘောင်ထဲမှာ (မိုးမခ) ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၈ ရွှေဝါရောင်အလင်းဟာ လက်ခနဲလက်ခနဲ မျက်စိရှေ့မှာ ဖြတ်ပြေးနေတယ်။ တခါ တခါ အထက်မှအောက်၊ တခါတရံ ဘယ် မှညာ၊ တဖန် ညာမှဘယ်သို့ အပြန်ပြန် အလှန်လှန်ရွေ့လျားဖြတ်သန်းနေတာ။ ပျော့ပျောင်းညင်သာစွာစီးမျောနေရာမှ အရှိန်ပြင်းပြင်းတုန်ခါမှုနှင့် ရေပွက်တခု။ ရေမှုန်ရေမွှားလေးတွေ နဖူးအထက်နားကို လာစင်တယ်။ မျက်တောင်ခတ်ဖို့ မေ့ လျော့နေခဲ့ရာမှ သိစိတ်ကို ပြန်လည်ရရှိလိုက်တယ်။ ရွှေဝါရောင်လေးက အောက်ခြေမှန်ကြမ်းခင်းနားထိ နိမ့်ဆင်းလာရင်း ကျောက်ဆွယ်ပန်းခက်တွေကြား တိုးဝင်သွားနေတယ်။ အမြီးဖျားလေးတချက်အခတ်မှာ မှန်ဘောင်စွန်းကအလင်းယိုင်ရဲ့ထိတွေ့ဖြာထွက်ခြင်းတွေဟာ ဂန္တဝင်မြောက်ပန်းချီကားတချပ်လို။ “ဦးအဖူး ဒီကောင်ကြီး ဘယ်လောက်လဲဗျာ။ ကျနော်ခေါ်သွားချင်တယ်။ အိမ်မှာသေသေချာချာထားပြီး ဂရုစိုက်ချစ်ပေးရမယ်” ပြောနေရင်း အားရပါးရ ပြုံးမိလိုက်တယ်ထင်တယ်။ “ဦးအဖူး – အလှမွေးငါးရောင်းဝယ်ရေး” ဆိုတဲ့ ထည်ထည်ဝါဝါဆိုင်းဘုတ်ကြီးဟာ...
မောင်တမ်းတ ● တိတ်တခိုး (မိုးမခ) ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၈ အဲဒီနေ့ မနက်ရှစ်နာရီလောက်မှာမှ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတွေ ကားနှစ်စင်းနဲ့ ရန်ကုန်ကထွက်ဖြစ်တယ်။ မင်္ဂလာဒုံ အထွက်က it လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ မနက်စာဝင်စားပြီး ထပ်ထွက်လာတာ ဘီးလင်းကို ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှ ရောက်တယ်။ နေ့လယ် နှစ်ချက်ထိုးခါနီးမှ ကျွန်တော်တို့ ဘားအံကိုဝင်တယ်။ မိုးတဖွဲဖွဲကြားထဲမှာပဲ ဘားအံရဲ့အထင်ကရ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်က ‘စံမတူ’ မှာ ကျွန်တော်တို့ နေ့လယ်စာ ဝင်စားတယ်။ ပြီး တော့ ဘားအံမြို့သစ်နဲ့ စက်မှုဇုန်ဘက်က သူငယ်ချင်းဝယ်ထားတဲ့ မြေကွက်ကလေးနှစ်ကွက်ကို သွားကြည့်ပြီး ညနေ သုံး နာရီခွဲလောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ မြဝတီကိုထွက်ခဲ့တယ်။ +++++ ဖြတ်လာတဲ့ လမ်းတလျှောက်လုံးမှာ မိုးတွေညို့နေတယ်။ ညို့နေရာက မိုးပေါက်လေးတွေပါကျလာတယ်။ နောင်လုံတောင် ကြားကို...
ကာတွန်း okkw ရဲ့ တာဝန် (မိုးမခ) ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း OKKW
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● အရူးများနှင့် ကျွန်တော် (မိုးမခ) ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၈ အရူးဟုဆိုလျှင် အဝတ်အစား စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နှင့် လမ်းတကာလျှောက်သွားကာ ဟိုဟာကောက်စား သည်ဟာကောက် စား၊ နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင်၊ မိုးရွာလျှင်စို နေပူလျှင်ခြောက်၊ နေထိုင်ရာ အတည်တကျမရှိ၊ စောင့်လျှောက်သူမရှိ၊ ဗိုက်ဆာ မှန်း မဆာမှန်းမသိ၊ တစ်ယောက်တည်းစကားတွေပြောကာ နေချင်သလိုနေ ထိုင်ချင်သလိုထိုင်၊ မည်သူ့ကိုမျှ ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်ချင် ရာလုပ်နေတတ်ကြသောသူများကို ကျွန်တော်တို့ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးကြသည်မဟုတ်ပါလား။ ယခုမူ ထိုသို့ မဟုတ်တော့ပေ။ အရူးများသည်လည်း ခေတ်မီလာကြချေပြီ။ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် နေတတ်လာကြပြီး လူရာဝင်ချင် နာမည်ကြီးချင် ဆယ်လီဖြစ်ချင် ဂုဏ်သတင်း မွှေးသည် နံသည် မသိ၊ ကျော်ဇောဖို့သာသိသော လိုချင်တာတစ်ခုရမည်ဆို လျှင် ခိုင်းသမျှ အကုန်လုပ်တတ်သောအရူးများ ပေါ်ပေါက်လာလေပြီ။...
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၃၃ဝ) (မိုးမခ) ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၈ လှသော ထက်သော ပြတ်သော ဝင်းမင်းသန်း (မကြာမီ စာဖတ်သူတို့ထံ ရောက်လာတော့မည့် ကြုံဖူး ဆုံဖူး ကြိုက်ဖူးသူများစာအုပ်မှ ဖြစ်၏။ BBC Interview တွင် မင်း သမီး မလုပ်ဟု ဆို၏။ အေးချမ်းသောဘဝကို ရှာသွား၏) (၁) ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရောက်သောနှစ်တွင် ဟောလိဝုဒ်က The Purple Plain ဇာတ်ကား မြန်မာပြည်၌ လာရိုက်မည်၊ မင်းသမီးအဖြစ် လူသစ်ကို ရှာဖွေမည် စသဖြင့် သတင်းများကြရသည်။ ထိုစဉ်က မြန်မာရုပ်ရှင် မင်းသမီး၊ ပြဇာတ်မင်းသမီး အချောအလှတွေလည်း အများကြီးပါ။ သို့သော်လည်း သူတို့ကမူ မျက်နှာသစ်ကိုသာ လိုချင်သုံးချင်ကြဟု...
ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းသူတွေ …
ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းသူတွေ … (မိုးမခ) ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - KZZH
မောင်စွမ်းရည် ● တောင်သူလယ်သမားကြီး (မိုးမခ) ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၈ တောင်သူလယ်သမားပါမောက္ခဆိုတာ ချင်းလူမျိုးစိုက်ပျိုးရေးပါမောက္ခ ဒေါက်တာဆလိုင်းထွန်းသန်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဆရာဟာ လယ်သမားပါမောက္ခဖြစ်ရုံမက ပါမောက္ခ လယ်သမားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တောင်သူလယ်သမားဘဝ ကလာပြီး စိုက်ပျိုးရေးပညာနဲ့ပါမောက္ခဖြစ်လာ ပါတယ်။ ပါမောက္ခဖြစ်တော့လည်း တကယ်လည်းစိုက်ပျိုးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဆလိုင်းထွန်းသန်း ပျိုရွယ်စဉ်အခါမှာသာ ဗမာပြည်ခေတ်ကောင်းနဲ့ကြုံခဲ့ရလို့ စက်မှုလယ်ယာ နိုင်ငံထူထောင်မယ်ဆိုပါစို့။ ဆရာဟာ ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါသနာ၊ စေတနာ၊ ပညာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးပညာဆိုတာ ဝိဇ္ဇာပညာ၊ စာပေပညာမဟုတ်။ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရတဲ့ သိပ္ပံပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဟာ သူဇာတိရပ်ရွာမှာရော၊ သူ့ကျောင်းမှာရော စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးပညာကို တပည့်တွေနဲ့ လက်တွေ့အသုံးချ အကောင် အထည် ဖော်ရာမှာ အောင်မြင်တာချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာသမဝါယမသဘော၊ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုလည်း ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့...
ကာတွန်း ညီပုချေ – သံချပ်မဟုတ် သံကျပ်
ကာတွန်း ညီပုချေ – သံချပ်မဟုတ် သံကျပ် (မိုးမခ) ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● တရုတ်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် မြန်မာ – အပိုင်း (၅)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● တရုတ်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် မြန်မာ – အပိုင်း (၅) (မိုးမခ) ဧပြီ ၇၊ ၂ဝ၁၈ ၂ဝ၁၈ မတ်လမှာ တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတသက်တမ်း ၂ ကြိမ်ကန့်သတ်ထားတာကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ တရုတ်သမ္မတ ရှိကျင့်ပင်းကို မော်စီတုန်းနဲ့ တတန်းထဲခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး ကမ္ဘာ့ထိတ်တန်းနိုင်ငံဖြစ်အောင် အထူးကြိုးစား တော့မယ် ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအကြောင်းရေးတော့ အဂတိတိုက်ဖျက်ရေး သေဒဏ်အထိပေးလို့ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုလဲ သေ ဒဏ်ထိပေးလို့ အုပ်ချုပ်သူအများ စိတ်ဓါတ်ကောင်းမွန်လို့ နောက်ဆုံး မဟာတရုတ်လူမျိုးကြီးဝါဒကြောင့် စသဖြင့် ပြောကြ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက စစ်မဖြစ်တဲ့ ရခိုင်၊ ချင်းပြည်နယ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲမွဲတေဆုံးဖြစ်နေပြီး စစ်ဖြစ်နေလက်နက် ကိုင်များရှိတဲ့ နယ်စပ်ပြည်နယ်တွေက သူဌေးများစွာ ပိုမိုကြွယ်ဝချမ်းသာပြီး ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ခြင်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၇၊ ၂၀၁၈ သာယာမှုအတွက် နာကျင်မှုရင်းရတယ် ပြောတော့ ငါ နိုးလာ ဘာလို့ကိုယ်တို့ တယောက်နဲ့တယောက် လိမ်ညာနေကြတာလဲ ငါက သကြားသီးဆို မှည့်ပေးဖို့အဆင်သင့်ပဲ ၁၉၉၅ ကနေ မအောင်မြင်တဲ့ပရိုဂျက်တွေနဲ့အတူ အခုထိ ကြီးထွားလာ မင်း ငါ့ကို အပြစ်တင်ရက်သလား အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြဖို့ရာ မီးအိမ်ဟောင်းကလေးသာ အသင့်တော်ဆုံးပဲ ပြီးတော့လည်း မင်း ငြင်းပယ် ရိုက်ခွဲခဲ့ ခုတော့ ဆေးလိပ်ဖွာပြီး ငါ့ရင်ဘတ်ထဲ မင်းရှိုက်သွင်းလို့ ပြန်ရှာနေကြတာနဲ့ပဲ တသက်လုံး ပြီးတော့မယ့်ပုံ အပြင်မှာလေတွေ တိုက်နေ မိန်းမတယောက် ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ထိုင်နေတယ် တကယ်အေးတာပဲကိုယ်တို့အသံတွေ ခုန်ထွက်သွားတယ် ရထားပေါ်မှာ ယန်းပေါဆတ်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပဓာန အရည်ရွှမ်းသစ်သီးတွေ အဲဒီလိုဆို ကောင်းမှာပါ တယောက်ယောက်ပေါ့ မင်းအတွက်...
ကာတွန်းကိုတေရဲ့ သက်သာတယ်များ ထင်နေလား … (မိုးမခ) ဧပြီ ၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းကိုတေ
ဗိုလ်ထက်မင်း – DKBA ဘိုးတော်နဲ့ အမှတ်မထင် တိုက်ပွဲကြုံတွေ့ခဲ့စဉ်က – ၁ (မိုးမခ) ဧပြီ ၇၊ ၂၀၁၈ Commander ဘ၀ ပထမဦးဆုံး စစ်မြေပြင်အမှတ်မထင်တိုက်ပွဲကြုံတွေ့ခဲ့စဉ် စစ်တပ်ဆိုတာ ဒီလိုဘဲလား ၄၀။ စာရေးသူ တပ်စုမှူးသင်တန်းတက်စဉ် မိမိအတွေ့အကြုံကို စာတမ်းတင်ရသလိုအကောင်းဆုံး ဖြစ်တာတွေကို နည်းပြကရွေးထုတ်ပြီး စင်မြင့်ပေါ် တက်ရှင်းရပါတယ်။ မိမိဖြစ်စဉ်ဟာ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာ ( အရင်ဆောင်းပါးမှာတင်ပြခဲ့တဲ့ ဆနင်းဒေသ SURA နဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲ လက်နက် ၅လက် ရ) မဟုတ်ဘဲ ရွေးထုတ်ခံရတာ အံ့သြခဲ့ပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတချို့က လှောင်ကြပါတယ်။ တိုက်ပွဲက ရတာ ပိုတန်ဖိုးရှိတာ မှန်ပါတယ်။ မိမိက ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းတက်ခဲ့စဉ်က ခပ်ညံ့ညံ့ဖြစ်ပြီး ဘလိုင်းတောင့်ကို နှုတ်ခမ်းနီတောင့်လို့ ပြောလိုပြော၊ စစ်တပ်အမျိုးအနွယ်မဟုတ်လို့ ဘာဆိုဘာမှ...
Page3of 890«12345...890»
ဟန်သစ်နိုင် - ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်၏ အောင်ဆန်းစုကြည် အမှတ်တရများစာအုပ် ထွက်ရှိ
လင်းသက်ငြိမ် ● အကြောင်းအရာ
>The Geek - Myanmar Burmese Journal Digest - 15th Oct 2008